I-Il Patio ikufutshane neBergamo, irenti yeholide eLombardy - I-Airbnb
I-Il Patio ikufutshane neBergamo, irenti yeholide eLombardy
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguMonica
Relaxa kunye nosapho lonke kule ndawo yokuhlala ithuleyo, apho unokutyela kwipatio egqunywe yijasmine, udlale kwigadi yabucala ngesilayidi kunye nemidlalo yabantwana, dlala intenetya kwaye wonwabele ichibi lokuqubha langaphandle kwipaki yeenkulungwane zakudala engakhathalelwanga. ikhaya lakho. Ixhotyiswe ngokupheleleyo, iPatio ikwavumela ukusebenza ngobuchule kumbulelo kwindawo etofotofo neqaqambileyo. Ixhotyiswe ngesango lokungena kabini, enye egadini, enye kwintendelezo ezolileyo eneendawo zokupaka.
13 km ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya i Orio al Serio, 8 km ukusuka Bergamo, 8 km ukusuka Dalmine (A4) yemoto uphuma, 60 km ngemoto Milan, indlu, wazibeka beziko ezintle, kunye kuthoba Ngenxa epakini, kuba ihlaziywe ngokupheleleyo. Ikhitshi elixhotyisiweyo kunye negumbi lokuhlambela elinebhafu entle. Nangona ifikeleleka kwi-staircase, ikwafanelekile kwiintsapho ezinabantwana kuba ixhotyiswe ngesango lokhuseleko. Iintsapho ezinabantwana abancinci zihlala zamkelekile, sikwabonelela ngebhedi kunye nesitulo esiphakamileyo sokutya kwabantwana.
Ikhanya kakhulu kwaye ithule, inikwa ngokulinganayo.
Ukunokwenzeka kokupaka kwamahhala kwintendelezo yangaphakathi.
Imizuzu emi-2 ukuhamba ukusuka kwivenkile enkulu kunye nakwindawo yokuthenga.
I-CIR 016143 - CNI - 00006
Imizuzu eli-10 ngemoto ukusuka kumbindi wesixeko esiyimbali saseBergamo.
Ifakwe kwindawo ezolileyo nenoxolo yedolophu yaseMozzo, ejikelezwe yilali eluhlaza kunye nepaki, kukuhamba imizuzu emi-5 ukusuka ezivenkileni, kwiivenkile ezinkulu kunye nevenkile yokutyela-pizzeria. Ngaphandle kwabo bafuna iBowling kunye negumbi lemidlalo.
Ukuqala ukusuka ekhaya ungafikelela ngebhayisekile iindlela ezimangalisayo zomjikelo weParco dei Colli, ngelixa kwi-2km ungafikelela kwisikolo esihle sokukhwela esiseValbrembo.
I-Flexible ekungeneni kwaye ujonge amaxesha, okoko nje kusemini.
Ndikhona ukucebisa ulwazi okanye iingcebiso malunga nommandla.
Ukuba andikwazi ukubakho xa ndingena, kuyakwenzeka ukuba ndingene ngokwam.